Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Tuesday, January 04, 2011 Tuesday, January 04, 2011 Labels: ဘလောဂ့်အထောက်အကူ
ကျွန်မတို့ ဘလောဂ့်လောကကြီးမှာ အများအားဖြင့် ဘလောဂ့်ကို ပုံမှန်အတိုင်းလေး အရှိန်မပျက် ရေးနိုင်ကြတာ ပြည်ပကနေ ရေးနေတဲ့ ဘလော်ဂါတွေ များကြပါတယ်.. ပြည်တွင်းကနေ ရေးနေသူများကျတော့ အင်တာနက် ကော်နက်ရှင် အခက်အခဲနဲ့ ဘလော်ဂါထဲကို ၀င်ဖို့အတွက် ကျော်ရခွရ အခက်အခဲတွေနဲ့ကြောင့် ပိုစ့်တွေ ပုံမှန်တင်နိုင်ဖို့ အတော့်ကို အခက်အခဲဖြစ်ကြပါတယ်.. ပြီးတော့လဲ အခုတစ်လော ဘလောဂ့်ရေးဖော် သူငယ်ချင်းတွေထဲက ပြည်ပမှာ အလုပ်လုပ်နေရာကနေဖြစ်ဖြစ်၊ ကျောင်းတက်နေရာကနေ ဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်မြန်မာပြည်ကို အပြီးသော်လည်းကောင်း၊ အလည်အပတ် သော်လည်းကောင်း ပြန်ကြသူတွေ ရှိပါတယ်.... ကိုယ့်မြန်မာပြည်ကို ပြန်ကြတော့မယ်ဆိုရင် စိတ်မကောင်းစရာက ဘလောဂ့်ပေါ်ကနေ နှုတ်ဆက်ပိုစ့်လေးတွေ အသီးသီးရေးလို့၊ အချို့ကလည်း အွန်လိုင်းပေါ်ကနေ ကိုယ်ခင်ရာမင်ရာ သူငယ်ချင်းတွေကို အိမ်ပြန်တော့မှာမို့ ဘလောဂ့် ရေးဖြစ်တော့မှာ မဟုတ်တဲ့အကြောင်း နှုတ်ဆက်စကားတွေ ပြောလို့၊ နောက် ပြည်တွင်းကနေ ရေးနေတဲ့ ဘလော်ဂါတွေကျတော့လဲ ကော်နက်ရှင်ကို အံမတုနိုင်တာနဲ့ဘဲ တဖြေးဖြေးနဲ့ ပိုစ့်တွေ အရေးကျဲ လာတာတွေ၊ အချို့လဲ ဘလောဂ့်လောကကို နှုတ်ဆက် ထွက်ခွာသွားကြတာတွေ အများကြီး ရှိကြပါတယ်.. အချို့သော စာရေးကောင်းသူတွေ၊ စာရေးဖို့ အရှိန်ယူနေတဲ့သူတွေ၊ အရှိန်ရနေသူတွေ ခုလို စိတ်ပျက်ပြီး နှုတ်ဆက် ထွက်ခွာသွားကြတာ နှမြောဖို့ ကောင်းပါတယ်..
တူညီကြတာ တစ်ခုက ဘယ်နေရာကနေ ဘလောဂ့်ရေးနေကြသူတွေဖြစ်ပါစေ… ကိုယ့်အိမ်ကို ခေတ္တဖြစ်စေ၊ အပြီးဖြစ်စေ ပြန်ကြတော့မယ်ဆိုရင် ဘလော့ဂ်မရေးဖြစ်တော့ဘူးတို့၊ အရင်လို ဘလောဂ့်ရေးနိုင်တော့မှာ မဟုတ်ဘူး ဆိုတဲ့စကားတွေ ကြားရတာဘဲဖြစ်ပါတယ်.. အခြား ဘယ်နေရာတွေမှာဘဲ ရှိနေသူဖြစ်ဖြစ် အင်တာနက်ကို အဆင်ပြေပြေ သုံးစွဲနိုင်ပြီး ကိုယ့်အိမ်ကိုယ့်မြေ ပြန်ကြတော့မယ် ဆိုကာကျမှ အင်တာနက် အဆင်ပြေတော့မှာ မဟုတ်ဘူး ဆိုတာမျိုး ဘာကြောင့်များ ဖြစ်ရပါသလဲလို့ အခါခါ စဉ်းစားရင်း စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်.. အဲဒီလို စိတ်မကောင်း ဖြစ်ရတဲ့အတွက်လည်း ကျွန်မ ဘာများ တတ်နိုင်မလဲ ဆိုတော့လဲ ကိုယ်လည်း မတတ်နိုင်တဲ့ကိစ္စ ဖြစ်ပါတယ်.. ဒါပေမဲ့ တတ်နိုင်တာလေး တစ်ခုကိုတော့ စာရေးဖော် မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများ၊ ဘလော့ရေးဖို့ အခက်အခဲ ဖြစ်နေသူများကို ဒီပိုစ့်လေးက အနည်းငယ်တော့ အထောက်အကူ ဖြစ်နိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပြီး ပြန်လည် မျှဝေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်.. ဒီပိုစ့်လေးဟာ မိမိရဲ့ အီးမေလ်းထဲနေကနေပြီး ဘလော့ပေါ်ကို ပိုစ့်တင်တဲ့နည်းဖြစ်ပါတယ်.. ဒီအကြောင်းကို နည်းပညာ ၀က်ဆိုဒ်တွေမှာ ဖော်ပြပြီး ဖြစ်တာကြောင့် တော်တော်များများ သိပြီး၊ ဖတ်ရှုပြီးတဲ့ အကြောင်းအရာ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်.. ဒါပေမဲ့ အလုပ်တစ်ဖက်နဲ့မို့ အချိန်မရလို့ မဖတ်ရသေးသူများ၊ ၀က်ဆိုဒ်တွေကို ၀င်ဖို့အခက်အခဲဖြစ်သူများ၊ ဘယ်မှာ ရှာဖတ်ရမယ်ဆိုတာ မသိသေးသူများ အတွက် ရည်ရွယ်ပြီး ပြန်လည် ရေးသားဖော်ပြပါတယ်ရှင်..
ပထမဦးစွာ အီးမေလ်းကနေ ပို့စ်တင်ဖို့အတွက် မိမိရဲ့ blogger dashboard ထဲမှာတော့ Setting အရင် ၀င်ပြင်ထားဖို့ လိုပါမယ်.. အဲဒီလို ပြင်ထားပြီးရင်တော့ blogger ထဲကို ကျော်ခွပြီး ၀င်ဖို့ခက်နေသူများ blogger ထဲ ၀င်စရာမလိုဘဲ မိမိရဲ့ ဂျီမေလ်းထဲကနေ ပိုစ့်တွေ လှမ်းတင်လို့ ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်..
စစချင်း Blogger ထဲကို Sign in ၀င်ရပါမယ်.. ၀င်ပြီးရင်တော့ Dashboard ထဲကို ရောက်သွားပါပြီ။ အဲဒီကမှ ပုံမှာ ပြထားတဲ့အတိုင်း Setting ထဲကို ၀င်ပါမယ်။
Setting ထဲရောက်သွားခဲ့ရင် ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း Email & Mobile ကို ရှာပြီး ကလစ်နှိပ်ပါမယ်..
ပြီးတော့ ခုလို အနေအထားကို တွေ့ရမှာပါ။ Email Posting Address နေရာမှာ အရှေ့ကတော့ မိမိ ဘလော့ဖွင့်စဉ်က သုံးထားတဲ့ အီးမေလ်း User Name ( အခု ကျွန်မပုံမှာ မြင်တွေ့ရတဲ့ apple လို စာလုံး တစ်ခုခုကို ) တွေ့ရမှာဖြစ်ပြီး လေးထောင့်ကွက်ထဲမှာ ဘာစာလုံးမှ ရှိမနေဘဲ အနောက်မှာတော့ @blogger.com ကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်… ဒါကြောင့် လေးထောင့်ကွက်လေးထဲမှာ မိမိ အတွက် လျှို့ဝှက်နံပါတ် ( မိမိတစ်ဦးတည်းသာ သိမဲ့ ) စာလုံးများကို ရိုက်ထည့်ဖို့ လိုပါမယ်..
ဥပမာ ကျွန်မဆီမှာ mylovelygreen19335 လို့ ဂဏန်းနဲ့ စာတွေ ဖြည့်လိုက်ပါတယ်.. ပြီးရင် အဲဒီ စာလုံး အတွဲကို မှတ်ထားဖို့ လိုပါမယ်.. အီးမေလ်းပို့ရင် ဒီလိပ်စာကို ပို့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်.. အခုဆိုရင် လိပ်စာက apple.mylovelygreen19335@blogger.com ဖြစ်နေပါပြီ။ apple နောက်မှာရှိနေတဲ့ . (dot) ဆိုတဲ့ အစက်ကလေး မကျန်အောင် သတိပြုစေချင်ပါတယ်..
အီးမေလ်းကနေ ပို့လိုက်တဲ့ ပိုစ့်တွေကို တစ်ခါတည်း တက်ပြီးသားဖြစ်စေချင်ရင် publish emails immediately ကို on ထားဖို့လိုပြီး၊ တစ်ခါတည်း မတင်စေချင်သေးဘဲ Draft ထဲမှာသာ သိမ်းထားစေချင်တယ်ဆိုရင်တော့ save emails as draft posts ကို on ထားဖို့ လိုပါမယ်.. ပြီးသွားရင် အောက်ဆုံးက SAVE SETTINGS ကို နှိပ်လိုက်ရုံပါဘဲ။ ဒါဆိုရင် အီးမေလ်းထဲကနေ ပိုစ့်တွေတင်ဖို့ setting ချတာ ပြီးပါပြီ။
စမ်းပြီးတော့ ပိုစ့်တစ်ပုဒ်လောက် တင်ကြည့်ရအောင်နော်။
မိမိရဲ့ အီးမေလ်းထဲကို ၀င်ပြီး အခါတိုင်းအီးမေလ်းပို့သလိုဘဲ ပို့ပါမယ်.. ဘလောဂ့်ဖွင့်ထားတဲ့ အီးမေလ်းမှ မဟုတ်ပါဘူး... မိမိလက်ရှိသုံးနေတဲ့ ဘယ်ဂျီမေလ်းကနေမဆို ပို့လို့ရပါတယ်.. To ဆိုတဲ့ ပို့သူနေရာကို အစောက စာလုံးတွေ ဖြည့်ခဲ့တဲ့ လိပ်စာလေးကို ရေးထည့်ပါတယ်.. ဥပမာ ခုနက မှတ်ခဲ့တဲ့apple.mylovelygreen19335@blogger.com ကိုဖြည့်ပါတယ်.. Subject နေရာမှာတော့ ရေးမဲ့ ခေါင်းစဉ်ကို ဖြည့်ပါမယ်.. မေလ်းထဲမှာ ပိုစ့်ခေါင်းစဉ်အဖြစ် ကျွန်မ စမ်းပြီးတင်မဲ့ ပိုစ့်ခေါင်းစဉ်ဖြစ်တဲ့ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် နေရအောင် ကို Subject နေရာမှာ ထည့်ထားပါတယ်.. ပုံလေးပါ ထည့်ချင်ရင်တော့ attach file လေးနဲ့ ထည့်လို့ရပါသေးတယ်.. ပြီးတော့ စာရေးတဲ့ ဘောက်စ်ထဲမှာတော့ ပိုစ့်အတွက် မိမိရေးထားတဲ့ အကြောင်းအရာလေးတွေ ကူးရေးထည့်ရုံပါဘဲနော်။ စာတွေကိုတော့ word ထဲမှာ ရေးကတည်းက justify လုပ်ထားဖို့ လိုပါမယ်.. လုပ်ပြီးမှသာ မေလ်းထဲကို ကူးထည့်ပါ။ သို့မှသာ ဘလော့ပေါ်မှာ စာတွေ ညီနေမှာ ဖြစ်ပါတယ်.. ပုံလဲထည့်ပြီးပြီ.. စာတွေလဲ စစ်ပြီးပြီဆိုရင် မေလ်းပို့သလို Send လုပ်ရုံပါဘဲနော်..
ကိုယ့်ရဲ့ ဘလော်ဂါထဲကို ၀င်ကြည့်မယ်ဆိုရင် ခုလို မေလ်းနဲ့ပို့လိုက်တဲ့ပိုစ့်လေးက ရောက်နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်.
ကိုယ့်ရဲ့ ဘလော့ဂ် မိန်းပေခ်ျ့ကို ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် မေလ်းကနေ ပို့လိုက်တဲ့ ပိုစ့်လေးဟာ ဘလော့မျက်နှာပြင်မှာ တက်သွားပါပြီနော်.. ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေရအောင်ဆိုတဲ့ ပိုစ့်လေးပါ.. ထည့်လိုက်တဲ့ ပုံကတော့ ထိပ်ဆုံးမှာပါ။
ပုံတွေကို အများကြီးထည့်ချင်လည်း ထည့်လို့ရပါတယ်.. Attach File နဲ့ ကြိုက်သလောက်ထည့်ပါ။ သို့သော်လည်း ပုံတွေက ပိုစ့်ရဲ့ အပေါ်ဆုံးမှာ ခုလိုမျိုး အစဉ်လိုက်သာ ပေါ်နေမှာ ဖြစ်ပါတယ်..
အခုဖော်ပြသွားတဲ့ အီးမေလ်းကနေ ဘလော့စပေါ့ကို ပိုစ့်တင်နည်းလေးကို ဖတ်ပြီး လေ့လာခဲ့ရတဲ့ မူရင်းဆိုဒ်က IT Share Site ဖြစ်ပါတယ်. တစ်ခြား နည်းပညာဆိုဒ်တွေမှာလည်း တင်ထားဖူးပြီးသား ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်.. အခု ကျွန်မ ရှင်းပြထားတာ မရှင်းလင်းခဲ့ရင် IT Share Site ရဲ့( ဒီနေရာလေးမှာ ) သွားရောက် ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်..
ဒီပိုစ့်ကို ရေးသားပြီး တင်ပေးထားသော IT Share Site နဲ့ အခြားသော နည်းပညာ ဆိုဒ်တို့အား ကျေးဇူးအထူး တင်ပါကြောင်းနဲ့ ပြည်တွင်းကနေ ဘလောဂ့်ပိုစ့်တင်ဖို့ အခက်အခဲဖြစ်သူများ၊ blogger ထဲဝင်ပြီး တင်ဖို့ အချိန်မရသူများ၊ ကျော်ခွရသူများ အဆင်ပြေချောမွေ့စွာ တင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆန္ဒမွန်ဖြင့် ဒီပိုစ့်လေးကို ထပ်ဆင့်ကာ ပြန်လည် ဝေမျှရေးသားပါတယ်ရှင်။
ဖြည့်စွက်ချက်။ ။ ပြည်တွင်းကနေ Blogger ကို အသုံးပြုပြီး ဘလော့ရေးနေသူများ၊ ကိုယ်ပိုင်ဒိုမိန်း မရှိသူများအတွက် sub domain ပေးလိုပါသဖြင့် အောက်ပါ အီးမေလ်းလိပ်စာကို မေလ်းပို့ပြီး တောင်းခံနိုင်တယ် ဆိုတာလေး ထပ်ပြီးဖြည့်စွက်ချင်ပါတယ်.. sub domain ရပါက မိမိ၏ဘလော့နှင့် ချိတ်ဆက်ပြီး ပြည်တွင်းမှ ကြည့်ရှုသူများက ကျော်ခွစရာမလိုဘဲ အလွယ်တကူ ၀င်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်လို့ သိရပါတယ်.. ပေးမဲ့ sub domain က mmblogger.info ဖြစ်ပါတယ်.. အရှေ့က မိမိရဲ့ ဘလော့လိပ်စာ(myname) နေရာမှာ ဖြည့်လိုက်ရင် http://(myname)mmblogger.info/ ဖြစ်လာမှာ ဖြစ်ပြီး ပြည်တွင်းမှ သုံးစွဲနေသူများကို အဓိက ပံ့ပိုးပေးလိုတာဖြစ်ပြီး sub domain အရေအတွက် ၇၀ နီးပါး ပေးမှာ ဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရပါတယ်.. ဘလော့ရေးသားသူများသည် ရသစာပေ၊ သုတစာပေ၊ ကဗျာ၊ ဆောင်းပါး တို့ကို ရေးသားနေသူများ ဖြစ်ပြီး တစ်လတစ်ကြိမ် အနည်းဆုံး ပိုစ့်များကို တင်နိုင်သူများ ဖြစ်ရပါမယ်ဆိုတဲ့ စည်းကမ်းချက်လေးများ ထားရှိပါတယ်လို့ sub domain ပံ့ပိုးပေးလိုသူမှ ဆက်သွယ် ပြောကြားလာပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားသူများ mrs.niniwin@gmail.com ကို အီးမေလ်းပေးပို့၍ ဆက်သွယ်နိုင်ပါကြောင်းရှင်....